यस्तो महँगीमा पनि काठमाडौँमै १० रुपैयाँमा कपडा पाइन्छ (भिडियोसहित), Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
यस्तो महँगीमा पनि काठमाडौँमै १० रुपैयाँमा कपडा पाइन्छ (भिडियोसहित)
काठमाडौँ। स्टोरमा ह्यांगर र र्‍याकभरि भरिभराउ सामान छन्। ग्राहक पनि धेरै छन्। । स्टोरमा राखिएका सबै सामानको मूल्य राखिएको छ १० देखि ५० रुपैयासम्म।
गोङ्गबु पासाङ लामु कलेज अगाडि रहेको सुखावती स्टोरमा एकपटक प्रयोग भइसकेका घरायसी सामान जम्मा गरिन्छ, मर्मत गर्नु पर्ने भए गरिन्छ र बिक्री गरिन्छ।
सुखावती फाउन्डेसनद्वारा सञ्चालित सुखावती स्टोरबाट दैनिक ५०० देखि २००० सम्मको सामान बिक्री हुने गरेको छ। यो रकम फाउन्डेसनले सामाजिक कार्यमा खर्च गर्छ। हेर्नुस् जनता टेलिभिजनले तयार पारेको यो भिडियो रिपोर्ट।